बाढी पहिरोले विभिन्न जिल्लाको जनजीवन अस्तव्यस्त, हजारौं बस्ती डुवानमा - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 Main News National Photo News बाढी पहिरोले विभिन्न जिल्लाको जनजीवन अस्तव्यस्त, हजारौं बस्ती डुवानमा
बाढी पहिरोले विभिन्न जिल्लाको जनजीवन अस्तव्यस्त, हजारौं बस्ती डुवानमा
गोलबजार, २८ साउन । अबिरल बर्षासंगै आएको बाढी र पहिरोका कारण मुलुकका विभिन्न जिल्लाको जनजीवन अस्तब्यस्त बनेको छ । तराईका अधिकांश जिल्लामा सड
क बगाउँदा यातायात अवरुद्ध भएको छ भने खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन सेवाहरु अवरुद्ध भएका छन् । बाढीका कारण पुर्वका सिरहा, सप्तरी, झापा, मोरङ, सुनसरी, रौतहट, धनुषा, बारा, नवलपरासी, दाङ लगायत जिल्लाका हजारौं घर डुबानमा परेको हाम्रा सहकर्मीहरुले जनाएका छन् ।
बाढीका कारण सप्तरीमा १५ हजार घर डुबानमा परेका छन् । एक हजार परिवार बिस्थापित भएका छन् । खाँडो, कोसी, जिता, महुली, बलान, खडग, सुन्दरी, भलुवाही, त्रियुगा लगायतका नदीमा आएको बाढीका कारण सदरमुकाम राजविराज सहित जिल्लाका २ दर्जन बढी गाउँ डुबानमा परेका छन् । तिलाठी, सकरपुरा, मल्हनिया, कोईलाडी, वनरझुला, टिकुलिया, वरसाइन, तोपा, मौवाहा, बेल्ही, देउरी भरुवा, भेडिया, मधवापुर, लगायत २ दर्जन बढी नगर तथा गाउँपालिकाका सबै घर पानीमा डुबेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अञ्चल प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालत, कृषि बिकास बैंक सुपरिबेक्षण कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लगायतका कार्यालय पनि डुबानमा परेका छन् । भारतीय पक्षले दसगजासंग जोडेर निर्माण गरेको पक्की बाँधका कारण बिभिन्न नदीमा पानी निकास हुन नसक्दा सप्तरीको मल्हनिया गाँउ तिनदिनदेखी टापुमा परिणत भएको छ ।
हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका अन्तरगत बीच कोसीमै रहेको गोबरगाढा गाउँ शुक्रबार बिहानबाट सम्पर्क बिच्छेद छ भने अधिकांशले घर छाडेका छन् । बाढीमा फसेका ५० परिवारका २ सय भन्दा बढी अझै उद्धारको पर्खाईमा छन् ।
तीन दिनदेखि भइरहेको वर्षाका कारण सिरहाका दर्जन बढी गाउँ डुवानमा परेका छन् । डिमा खोलाको पानी गाउँमा पस्दा कर्जन्हा गाउँपालिका–६ गौताडीका दर्जनौं बढी घरहरु डुवानमा परेका हुन् । लगातारको वर्षाका कारण बेचो खोलामा आएको बाढी कल्याणपुर नगरपालिका–४ मा रहेका घरमा पसेको छ ।
वर्षा नरोकिएका कारण स्थानीय बासिन्दा त्रसित भएका छन् । वर्षाले सिरहा जिल्लाका मिर्चैया, गोलबजार, लहान, सुखिपुरका घर डुवानमा परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिए । कमला नदीले कटान सुरु गरेकाले बाँध बनाउने काम भैरहेको छ ।
नवलपरासीको दक्षिणी प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का एक एक सय घरपरिवार डुवानमा परेका छन् । भित्रि कच्ची सडक जलमग्न भएर आवगमन अवरुद्ध भएको छ । पुर्वपश्चिम राजमार्गको बर्दघाट चिसापानी सडक खण्ड बाढिले जलमग्न भएर हिडन नमिल्ने भएको छ । दाउन्नेमा गएको पहिरोका कारण रोकिन बाध्य गाडी चिसापानी खण्डमा डुबेको सडकमा अलपत्र परेका छन् ।
कनकाई नदीमा आएको बाढीले झापा गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७, विरिङ खोलाको बाढीले सोही गाउँपालिकाको १ देखि ५ नम्बर वडाका हजारौं घर, कनकाईकै बाढीले गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नं. १ का ६ सय घर, कमल खोलाको बाढी गाउँ पस्दा शिवसताक्षी नगरपालिका २ धरमपुरको माझी बस्ती, शिवसताक्षीकै माइधारबाट १० घर डुवानमा परेका छन् । कनकाई नदीमा आएको बाढीले नदीको पश्चिमपट्टी यसै बर्ष बनाइएको बाँध भत्काउँदा नदी किनारका १ सय ५० परिवार कटानको उच्च जोखिममा परेका छन् ।
सुनसरीका विभिन्न स्थान डुबानमा परेका छन् । नदीमा पानीको बहाब बढेपछि कोशी ब्यारेजमा खतराको संकेत रातो झण्डा देखाईको छ भने ३५ वटा ढोका खोलिएका छन् । स्थानीय बुढी खोला, टेंग्रा खोला, सेरा खोला बस्तीमा पस्दा ईटहरी बजार डुबानमा परेको छ । बाढीले मोरङ्क र सुनसरी जोड्ने बुढी खोलाको झोलुङ्के पुल पनि बगाएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका पनि जलमग्न बनेको छ । महानगरको ४, ५, ६, ११ र १२ नम्बर बडामा भल पसेर सयौं घर डुबानमा परेका छन् । ती स्थानका करिब ६ सय परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
महोत्तरीको मलिवारी स्थित सशस्त्र प्रहरीको राजश्व तथा भन्सार गुल्मको भवन डुवानमा पर्दा भन्सार नाका बन्द भएको छ । भवन डुबानका कारण त्यहाँ रहेको सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीलाई स्थानान्तरण गरिएको भन्सार प्रमुख केशव भण्डारीले जानकारी दिए ।
उता दाङमा रातभर भएको अविरल बर्षाका कारण बिभिन्न बस्ती डुवानमा परेका छन् । बाढीका कारण लमही–घोराही–तुलसीपुर सडकखण्ड अबरुद्ध भएको छ । चितवनको रियू र चितै खोलामा आएको बाढीले माडी नगरपालिको १६ घरमा क्षति पुगेको छ । त्यहाका १० वटा पुल बगाएकाले यातायात बन्द भएकाले आवागमनमा कठिनाई भएको छ । बाढीबाट जोगाउन लगाईएको १२ वडा ड्याममा क्षति पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । प्रजिअ भट्टका अनुसार ३ सय घरमा आशिंक क्षति पुगेर बस्न नहुने भएको छ ।
रौतहटकोको चन्द्रनिगाहापुर, गरुडा, शिवनगर, महम्मपुर, हर्साहा, रमौली बैरिया, जिंगडिया, ब्रम्हपुरी, लगायतका बस्तीहरु डुबानमा परेका छन् । बिभिन्न नदी खोलामा आएको बाढीका कारण जिल्लाको आधा भन्दा बढी क्षेत्र डुवानमा परेको छ ।
धनुषा सदरमुकाम जनकपुरसहित विभिन्न स्थानको जनजीवन कष्टकर बनेको छ । पूर्वी धनुषाको कमला नदीमा आएको बाढीबाट आधा दर्जन बढी गाउँ डुवानमा परेका छन् । बाँकेको डडुवा गाउँपालिका र राप्तिसोनारी गाउँपालिकाका दुई दर्जन बस्ती डुबानमा परेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् ।
बर्दियाको बबई र मानखोलामा आएको बाढीले दुई सय १३ घर डुवानमा परेको छ । १ हजार ५ सय बिस्थापित भएका छन् । बाढीले सबैभन्दा बढी बारबर्दिया बारबर्दियामा ७१, वनगौढीमा २५, बासगढी–८ मा १५, बासगढी–४ मा २५ घर गरी १ सय १८ घर डुवानमा परेको छ । बासगढी–१ चेपाङ्गमा तुल बहादुर विकको घर बाढीले क्षती हु‘दा भाडामा बस्ने तीन जना घाईते भएका छन् । ती मध्ये नमकली विकको अवस्था गम्भिर छ । बाढीले बगाउँदा बारबर्दिया–१० का २९ वर्षीय राजेन्द्र चौधरी वेपत्ता भएको प्रहरी उपरिक्षक भरत बहादुर बोहोराले बताए ।
अविरल बर्षाले बाराको जमुनी, तियर, थलही, दुधौरा, बंगरी, पसाहा, अडुवा, लालबकैया लगायतका खहरे खोलाबाट बाढी पसेर जिल्लाको अधिकांस ठाउँ डुबानमा परेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् । सोनाभार, जुगवा, थस्कौल, धोधड्पा, प्रगतिनगरमा रहेको आधा दर्जन पुल बगाएपछि अन्य गाउँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ । लगातारको बर्षाका दाङका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेका छन् । तुलसीपुर–घोराही सडक खण्डको हातीखौवामा बाढीले करिव १० मीटर सडक बगाउँदा यातायात बन्द भएको छ । यसैगरी दंगिशरण–५ स्तिथ भमके खोलामा ३५ घरमा बाढी पसेको छ ।
धादिङको विकट वस्ती रुवीभ्याली–४ हिन्दुङको पुरै वस्ती जोखिममा परेको छ । गत आईतवार राती वाट वग्दै गरेको पहिरो नरोकिए पछि हिन्दुङ्क का पुरै ९६ घरपरिवारले थातथलो छाडेका छन् ।